Hel shahaado iyo caddaynta aqoontaada | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad doonaysid inaad shaqayso / Hel shahaado iyo caddaynta aqoontaada
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 9 7 2018
Haddii aad haysato waxbarasho ama waayo-aragnimada dhinaca shaqo laakiin aanad haysan warqad iyo caddaynta arintan waxaad sugi kartaa aqoontaada. Haddii aad sugnin ku samaysid aqoontaada waxaad dhamaysan kartaa waxbarashadaada oo heli kartaa shaqo si dhakhso ah.
In sugnin lagu sameeyo aqoontaada micnaheedu waa inaad sharaxayso oo qiimeynayso waayo aragnimadaada iyo waxa aad taqaano. Waxaad helaysaa fursada inaad muujiso aqoontaada dhinac waaqici ah iyo caqliyan iyadoo loo marayo wareysiyo, imtixaano iyo imtixaano shaqo.
Xafiiska Shaqada ayaa kaa caawin karta sugninta. Waxaad helaysa caawimaada in la qiimeeyo nooca heerka aqoontaadu tahay iyo haddii aad u baahantahay waxbarasho dheeraad ah si aad uga shaqayn karto xirfad cayiman.
Xafiiska Shaqada ayaa sugnintaada ku qoraya caddayn aqooneed ama shahaado aqooneed.
Dheeraad ku saabsan sugninta ka akhriso bogga Xafiiska Shaqada.